November | 2013 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on November 29, 2013 by chitnge
အရမ်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ သူများ သားသမီးကို ရုပ်နာမ် မသိဘူးတို့ဘာတို့ အရမ်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ — ကိုယ်ကရော ဘယ်လောက်သိလို့လည်း။ ရုပ်နာမ် မသိသေးတဲ့သူ ပြောတဲ့စကားတွေလား၊ ရုပ်နာမ်သိပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြီး ကျင့်ကြံလို့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စကားသံလား – ဆိုတာ မခွဲခြားတတ်ဘူးလား !!! ဘယ်လိုရှုထောင့်က ကြည့်နေတာလဲ?? မလိုတမာ ရှုထောင့်က ကြည့်နေတာလား .. တစ်ပါးသူကို မတရား လုပ်ကြံပြီးတော့ လွဲမှားစွာ ဆုံးဖြတ်မယ် မကြံနဲ့ – ဒါ ဂုဏ်းသင့်သွားမယ်၊ မဂ်တား ဖိုလ်တား … Continue reading →
ယောဂီများသို့ပန်ကြားချက် ယောဂီများ တရားလိုက်စား၍ သာဓုခေါ်ခဲ့ရပါသည်။ အသိပညာ ဗဟုသုတ အဆင့်အတန်း မြင့်သောကြောင့်လည်း အထူးသာဓုခေါ်မိပါသည်။ အရှိန်လေးရနေတဲ့ အခိုက်မှာ ပြင်ပမှာ ဒိဋ္ဌိအသံတွေ လွှမ်းတာကို ကြားသိရသည်။ ထို့ကြောင့် ယောဂီများထံ ခွင့်ပန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်က ဒိဋ္ဌိအသံများအား အနည်းငယ် ဖြေရှင်းတိုက်ခိုက်ရန် စိတ်ကူးရသောကြောင့် ယောဂီများအား ရှေးဦးစွာ ပန်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်မှာ ယောဂီများလောက် အဆင့်မရှိကြပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်စွာဘုရား
Posted on November 28, 2013 by chitnge
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အမှန်တရားကိုလက်မခံလျှင် ကွန်မြူနစ်ကလွှမ်းမိုးသွားမယ် အခုတစ်လော ကွန်မြူနစ်ဟာ ထိုးဖောက်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ထိုးဖောက်နေတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ အမှန်ကို လက်ခံဖို့လိုလာတယ်။ ဥပမာ — နိဗ္ဗာန် သွားမယ်ဆိုရင် ရုပ်နာမ် ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် ချုပ်ရမှာပေါ့။ မချုပ်သလိုလို ချုပ်သလိုလို လုပ်နေရင် ကွန်မြူနစ်အစာ မိသွားမှာပဲ။ ကွန်မြူနစ်တွေက သင်တန်းတွေလိုက်တက်တယ်၊ ဝိသုဒ္ဓိတွေတက်တယ်၊ အဘိဓမ္မာတွေတက်တယ်၊ ဘာသာရေး သာသနာရေးတက်ပြီး သူတို့က လူစွာလုပ်ပြီးတော့ တစ်ခြားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို သူတို့က သွေးထိုးပြီး၊ ဝိဝါဒကွဲအောင် လုပ်နေတယ်။ ကွန်မြူနစ်ကတော့ ဉာဉ်ဆိုးတာ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် … Continue reading →
Posted on November 26, 2013 by chitnge
အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးကြရအောင် ဒီခေတ်မှာ သိပ္ပံလိုက်ချင်လည်းလိုက်ပါ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်လည်း လုပ်ပါ၊ ကွန်ပြူတာတို့ အားကစားတို့ လိုက်ချင်လည်း လိုက်ပါ – ရပါတယ်။ လောကုတ္တရာကိုလိုက်တယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လိုက်တယ်၊ သစ္စာကိုလိုက်တယ် ဆိုရင်တော့ အမှန်ကိုမြတ်နိုးပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလိုက်လျှက်၊ လောကုတ္တရာကိုလိုက်လျှက် အမှန်ကို မမြတ်နိုးဘူးဆိုတော့ အတော်ပျော့ညံ့ရာကျတယ်။ နောက်ပြီးတော့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို သစ္စာဖောက်ရာကျတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သစ္စာဖောက်ရင် လူသားတွေကို သစ္စာဖောက်တာနဲ့ Tags: ၀ိပဿနာ, နိဗ္ဗာန်, မြတ်စွာဘုရား
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, နိဗ္ဗာန်, မြတ်စွာဘုရား	| 1 Comment
ခန္ဓာနိယောဓေါနိဗ္ဗာနံ နိဗ္ဗာန်မှာ ခန္ဓာချုပ်ရတယ်။ အကျင့်မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိဗ္ဗာန်မှာ ခန္ဓာမချုပ်ဘူးလို့ ယူဆကြတယ်။ အဘိဓမ္မာစာအုပ် တစ်အုပ်ထဲမှာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ချမ်းသာတဲ့ စိတ်ကလေးလို့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ခက်တာက အဘိဓမ္မာကို ကြည်ညိုတယ် ဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်အတ္တကို ကြည်ညိုနေကြတာက ဝမ်းနည်းစရာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ အဘိဓမ္မာကို ကြည်ညိုရင် အဘိဓမ္မာကို ကြည်ညိုဖွယ် ကောင်းအောင်ယူရမယ်။ အဘိဓမ္မာကို ရှေ့နောက် မညီညွှတ်အောင် လုပ်စားနေကြတာကတော့ အဘိဓမ္မာကို မကြည်ညိုရာမကဘူး သာသနာဖျက်နေကြတယ်လို့ပဲ ယူဆစရာ Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, နိဗ္ဗာန်, မြတ်စွာဘုရား	| 1 Comment
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာရှေ့နောက်ညီညွှတ်တယ် ယခုတစ်လော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရှေ့နောက်မညီညွှတ်အောင် ပြောနေကြတယ် — ကွန်မြူနစ်လေသံပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်ထဲအထိ ရုပ်နာမ်ကို ခေါ်ချင်ကြတယ်။ ရုပ်နာမ်ဟာ မကောင်းလို့ မကောင်းဘူးပြောတာ – ဒုက္ခသစ္စာပဲ၊ နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာ အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့တရား သန္တိသုခပဲ။ ဒါကို နိဗ္ဗာန်သွားချင်တယ် ဆိုပြီး ရုပ်နာမ်ကို ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ဒါတော်တော် ရူးချက်သန်တာပဲ။ ဘုရားဟော တရားကိုလိုက်ပါဆို ဘုရားဟောတရားတော့ မလိုက်ဘူး။ ဘာ ဥက္ကဌပြောတာကို ပြောတာကိုပဲ လိုက်နေတယ်၊ ဘာ ကျောင်းအုပ်ကြီးက Tags: Buddhism, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on November 24, 2013 by chitnge
ယောဂီများသို့ — ယောဂီများကို အထူးလေးစားပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း တော်တော်များများက တတ်နိုင်သမျှ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ရေးပါတယ်။ အခု အပြင်မှာကတော့ သာသနာဖျက်တွေက အသံထွက်နေတာ များနေလို့ သူတို့ကိုနည်းနည်း တုန့်ပြန်ပြောဆိုရင်းနဲ့ ရေးရတာလေးတွေကို ခွင့်ပြုနားလည်ပေးပါလို့ ပထမဆုံး အသိပေး မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ သာသနာဖျက်တွေက များနေတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာတော်ကို Tags: Buddhism, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, မြတ်စွာဘုရား
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, မြတ်စွာဘုရား	| 1 Comment
Posted on November 21, 2013 by chitnge
အားပေးစကားပြောတာပါ ယောဂီများကို အားပေးပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် တရားကျင့်လာတဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်တိုင် တိုးတက်တာကို တွေ့ရှိခံစားရတယ်။ ယခုဆိုရင် မိမိကိုယ်တိုင် အကုသိုလ် အကြီးကြီးတွေ မလုပ်တော့ဘူး။ အဓမ္မရာဂလည်း မရှိဘူး၊ ဝိသမလောဘလည်း မရှိဘူး၊ မိစ္ဆာဓမ္မပရေ၁၂တ ရှိရင်လည်း နည်းနည်းပဲရှိမယ်။ ဒီတော့ တရားကျင့်တဲ့ အခါကျ တရားကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရရှိတဲ့ဂုဏ်ကတော့ ရတာပါပဲ။ (Practice makes Perfect) ဆိုတာ အမှန်အကန်ပါပဲ။ ဘောလုံးကန်ကျင့်ရင် ဘောလုံးတော်တာပါပဲ၊ သိုင်းကျင့်ရင် သိုင်းတော်တာပဲ၊ ကွန်ပြူတာကျင့်ရင် ကွန်ပြူတာတော်တာပဲ။ ဒီလိုပဲ … Continue reading →